एमालेकै उम्मेदवार यसपाली जनकपुरको मेयरमा जितेर देखाउँछः श्रीप्रसाद साह, केन्द्रिय सदस्य नेकपा एमाले – doodhmati || dudhmati
Home / बातचित / एमालेकै उम्मेदवार यसपाली जनकपुरको मेयरमा जितेर देखाउँछः श्रीप्रसाद साह, केन्द्रिय सदस्य नेकपा एमाले
एमालेकै उम्मेदवार यसपाली जनकपुरको मेयरमा जितेर देखाउँछः श्रीप्रसाद साह, केन्द्रिय सदस्य नेकपा एमाले
Sujeet Jha May 9, 2017	बातचित 160 Views
प्र. स्थानीय तहको चुनावका लागि नेकपा एमालेको जनकपुरमा तयारी कसरी चलिरहेको छ ?
हामी पनि अन्य पार्टी जस्तै उम्मेदवार छनौट प्रकृयामा लागेका छौँ । कार्यकर्ता भेटघाट र स्थानीय मतदाताहरुसंग जनसम्पर्क पनि बढाएका छौँ ।
प्र. भनिन्छ एमालेका कोही नेता जनकपुरबाट उम्मेदवारका लागि खासै इच्छुक छैनन् ?
त्यस्तो नभनौँ । हाम्रो पार्टी बिरुद्धमा मधेशमा षडयन्त्र चलिरहेको छ । पत्रकारहरु पनि यस्तो भन्न थाल्यो भने हामीलाई ठूलो समस्या हुनेछ । हाम्रो पार्टीबाट दर्जनौँ व्यक्ति उम्मेदवार बन्न इच्छुक देखिएका छन । हामी चाँडै उम्मेदवारको छनौट प्रकृया सम्पन्न गरी प्रचार प्रसारको कार्य शुरु गर्नेछौँ । जनकपुरबाट नेकपा एमालेको उम्मेदवार जितेर देखाउँछ । षडयन्त्र गर्नेहरुको पर्दाफास हुनेछ ।
प्र. तपाईले एमाले विरुद्ध षडयन्त्र भईरहेको भन्नु भयो, कसले षडयन्त्र गरिरहेको छ ?
नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले विरुद्ध ठूलो षडयन्त्रमा लागेको छ । मधेशका जिल्लाहरुमा गएर अनाप सनाप कुरो गर्छन । कांग्रेसका मतियार मधेशवादी दल पनि भएको छ । कांग्रेस जति मधेश बिरोधी कुनै दल नेपालमा छैन ।
प्र. एमाले त मधेशको पक्षधर नै रहेको तपाईहरु भन्नु हुन्छ तर संविधान संशोधनमा किन आलटाल गर्नु हुन्छ ?
अहिले संविधान संशाधनको आवश्यक्ता छैन । अहिले कार्यान्वयनको आवश्यक्ता रहेको छ । कार्यान्वयन भएपछि जे जति समस्या आउँछ त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ ।
प्र. जनकपुरमा एक्लै लड्नु हुन्छ वा चुनावी तालमेल गरेर ?
यस सम्बन्धमा हामीले कुनै त्यस्तो निर्णय गरेका छैनौँ । विभिन्न विकल्पहरुको विषयमा विचार विमर्ष गरिरहेका छौँ । जनकपुरबाट नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई कुनै हालतमा जित्न दिन्नौँ । २२÷२३ बर्ष देखि कांग्रेस जनकपुरमा नेतृत्व गरिरहेको छ सबैभन्दा बढी मन्त्री कांग्रेसकै भएका छन । तर जनकपुरको स्थिति जर्जर रहेको छ । स्वतन्त्रबाट जित्नेहरु पनि कांग्रेसकै थिए यो सत्यलाई सबैले बुझिरहेका छन ।
Tags केन्द्रिय सदस्य नेकपा एमाले श्रीप्रसाद साह
Previous जनकपुर हिलाम्यै
Next आयोगले भन्यो – पुरानो कार्डले भोट हाल्न पाइँदैन, नयाँ कार्ड लिनुस्